Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo shaaciyay sida Shabaab looga guuleysan karo – idalenews.com
Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo shaaciyay sida Shabaab looga guuleysan karo
Garowe(INO)- Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Puntland C/xakiin Xaaji Cumar Camey, ayaa iftiimiyay sida looga guuleysan karo Ururka Al Shabaab oo waayahan dambe kordhiyay qaraxyada ay ka geysanayaan Magaalada Muqdisho iyo Gobolada dalka.
Camey ayaa sheegay tallaabada ugu haboon ee Shabaab looga guuleysan karo inay tahay iskaashi wada shaqeyn dhanka ammaanka ah oo dhexmara Dowladda Federalka Somaliya iyo Maamul Goboledyada dalka ka jira.
Waxa uu sheegay hadii Dowladda iyo Maamul Goboledyada dalka ka jira ay isdhaafsadaan Xogaha Ururka Al Shabaab, taasi ay sahlayso in laga guuleysto Kooxda.
“Waxaan dhihi lahaa isku daya dowladda Federaalka iyo Milkiilayaasha Hotelka Xalka qaraxyada maalmahan dambe ku soo laabtay Muqdisho iyo waxa lagu badbaadin karo shacabka Somaliyeed, waxa kaga qeylisiinaya reer Puntland in la midoobo oo la iska kaashado la dagaallanka cadowg waa dhibaatooyinkaan oo kale, waa in la is dhaafsado wixii warar ah oo laga hayo cadowga, sida kaliya ee Al-shabaab lagu jebin kara waa midnimo Dowladda Federalka xogaha dhanka Shabaabka hala wadaagto Maamul Goboledyada dalka ka jira.” ayuu yiri Madaxweyne ku xigeenka.
Siyaasiyiinta Somaliyed ayaa Dowladda ku dhaliila inuu liito Sirdoonkeeda, oo loo baahnaa Bulshada dhexdeeda inay ka keenaan macluumaadka ku aadan ficilada lidiga ku ah dhanka ammaanka.
Al Shabaab weli waxa ay ku sii hanjabayaan inay kordhinayaan qaraxyada ay ka geysanayaan Magaalada Muqdisho, iyagoo ku goodinaya inay laynayaan dad hor leh.
Qaraxii shalay lagu weeraray Hotelka SYL ee Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku geeriyooday in ka badan 20 ruux oo Askar iyo shacab isugu jira, halka ay ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan.